Petition · Save Bagan - Its Our Heart · Change.org
Save Bagan - Its Our Heart
Myanmar Archaeology Association started this petition to Mandalay Division Decision Maker and Local Governance and
Immediate Measures to be Taken by Bagan Heritage Region Management Committee
To stop all the on-going attempts to preserve the man-made mounds
To stop issuing of notices and prohibitions that can pose inconveniences to the socioeconomic life of the local people
To stop issuing ofawide variety of permissions for construction of hotels in the Bagan Heritage Zone
To stop implementing of decisions and policies that have been laid down regardless of public opinions including the CSOs and the Academic Organizations
To stop any type of landscaping that may damage the visual landscape of Bagan
To reconsider and overrule the decisions drawn in the absence of Visitors Management Plan (including Pagoda Climbing Ban that has been badly affecting local economy and tourism industry.)
To stop every undertaking or function infringing the rights vested in the provisions of the existing laws.
To draw up an archaeology risk map for Bagan Heritage Zone
To deviseamaster plan for Sustainable Cultural Heritage in Bagan Heritage Zone
To developaVisitor Management Plan that could boost the socioeconomic life of local people and gear upasustainable cultural tourism in Bagan Heritage Zone
To re-draw the zone map that is not based on the public interest, favoring the business tycoons but oppressing the local peoples land property rights
To organize an independent committee comprising independent researchers, scholars, local CSOs and local people for implementation of projects
To issueaprinciple for any upcoming development program in Bagan that the persons concerned shall undertake Heritage Impact Assessment as top priority and strictly follow the decisions of HIA
To be accountable and responsible for everything that has been done.
ပုဂံဒေသစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေနှင့် ရပ်တန့်သင့်သည့် လုပ်ငန်းများ
1. လူလုပ်ကုန်းများကုို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းများကုို ရပ်တန့်ရန်။
2. ဒေသခံများ၏ နေ့စဉ်လူမှုစီးပွားဘဝတွင် အခက်အခဲဖြစ်စေနုိုင်သည့် မလုိုလားအပ်သည့် တားမြစ်ချများ ထုတ်ပြန်ခြင်းကုို ရပ်တန့်ရန်။
3. ဇုန်အတွင်းတွင် ဟုိုတယ်များဆောက်လုပ်ခွင့်ကုို ခွင့်ပြုချက်မျိုးစုံဖြင့် ခွင့်ပြုနေခြင်းကုို ရပ်တန့်ရန်။
4. ဒေသခံပြည်သူများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြံပြုချက်များကုို လစ်လျူရှု့ ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေသည့် မူဝါဒများကုို ဆက်လက်မဖော်ဆောင်ရန်။
5. ဒေသနှင့် ပုဂံ၏ မြင်ကွင်းကို ထိခိုက် ညစ်နွမ်းစေသော အလှဆင် landscape ဖန်တီးခြင်းများ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရန်။
6. Visitor Management plan ကုို မရေးဆွဲဘဲ ဘုရားများအားလုံးကို တက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်၊ (ဘုရားများပိတ်ထားခြင်းကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းထိခုိုက်သလို ဒေသရှိ အခြေခံ လူတန်းစားတုို့၏ စားဝတ်နေရေး ထိခုိုက်နိုင်ပါသောကြောင့်)
7. တည်ဆဲဥပဒေများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကုို ကျော်လွန်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လုပ်ကုိုင်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ရန်များအား အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ရန်။
အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်သင့်သည့် လုပ်ငန်းများ
1. ပုဂံဒေသတွင် ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ဆုံးရှုံးခံရနိုင်သည့် စစ်တမ်း (Archaeology Risk Map) ကုို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ရန်။
2. ပုဂံဒေသတွင်ရှိသော အမွေအနှစ်များတည်တံ့ရေးစီမံချက်များအတွက် တိကျသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် Master Plan တစ်ခု အမြန်ဆုံး ရေးဆွဲရန်။
3. Visitor Management ဟုခေါ်သည့် ခရီးသွားများဝင်ရောက်မှုများခြင်းကြောင့် အမွေအနှစ်များ ပျက်စီးမှု မဖြစ်စေရေးနှင့် ဒေသခံလူထုတုို့၏ လူနေမှုဘဝ အဆင်ပြေစေရန် အမွေအနှစ်ဇုန်အတွင်း မည်သို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ဆိုသည့် ရှင်းလင်းတိကျသော စည်းကမ်းချက်များ နှင့် စီမံချက်များ ရေးဆွဲရန်။
4. မျှတမှု မရှိသော၊ ဒေသခံလူထု၏ မြေယာပုိုင်ဆုိုင်ခွင့်ကို ချုပ်ခြယ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေသည့် နည်းစနစ်မကျသည့် ဇုန်မြေပုံအား အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်။
5. စီမံကိန်းများ လုပ်ကုိုင်ရန်အတွက် ကော်မတီတွင် လွတ်လပ်သည့် ပညာရှင်များ၊ ဒေသခံအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူများ ပါဝင်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ကော်မတီတခု ဖွဲ့စည်းပေးရန်။
6. ပုဂံဒေသတွင် လုပ်ကိုင်မည့် မည်သည့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကုိုမဆုို စီမံချက် မစမီကပင် အမွေအနှစ်များအပေါ်ထိခုိုက်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးသည့် စစ်ဆေးခြင်း (Heritage Impact Assessment ) လုပ်ငန်းကို ဦးစွာလုပ်ကိုင်ရန်နှင့် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ ၏ ဆုံဖြတ်ချက်ကုို လိုက်နာ၍သာဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း စည်းကမ်းချက်ထုတ်ရန်။
7. လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသော လုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက် တာဝန်ယူ/ တာဝန်ခံနိုင်မှုရှိရန်။
Please share my name and email address with Myanmar Archaeology Association, so that I can receive updates on this campaign and others.